Linux မှာ Voice နဲ့ Video Chat သုံးနိုင်ပြီ - keywords HERE
Home » linux » Linux မှာ Voice နဲ့ Video Chat သုံးနိုင်ပြီ
Linux မှာ Voice နဲ့ Video Chat သုံးနိုင်ပြီ
ကျနော်လင်းနက်စ် Linux ကို သုံးတာကြာပါပြီ ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်အဆင့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။စမ်းသပ်တဲ့
အဆင့်လေးပေါ့။ လွန်ခဲ့လေးနှစ်လောက်တုန်းက laptop အစုပ်တလုံးနဲ့ ၀င်းဒိုးသုံးလို့အဆင်မပြေတော့တာနဲ့
ဆရာတစ်ယောက်က linux ubuntu5ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီချိန်တုန်းက ကျနော့်ဝန်းကျင်မှာ linux
သုံးတဲ့လူမရှိသလောက်ပါပဲ။ ဆရာကကျွမ်းကျင်တဲ့လူဆိုတော့linux ကိုအရမ်းအမွမ်းတင်ပြီးပြောနေတယ်လေ။
ကျနော်လဲ အဲဒါနဲ့ဟုတ်သော်ရှိ၊ မဟုတ်သော်ရှိ linuxကိုတင်ထားလိုက်တယ်။
ဂျီတော့ကကလွဲပြီး တော်များအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေကို ကျနော်စက်ကို လာကိုင်တဲ့အခါ ဂျီတော့ကိုပဲ
ဲပြဿနာရှာနေတာဗျာ။ သိတယ်မလား။ ကိုယ့်လူအများစုက net ပေါ်ရောက်လာရင် တော့တာ၊ ချက်တာခပ်များများလေ။ သူတို့တော့လို့မရတော့ ဘာပြောလဲ မင်း ”linux”က ချာတူးပါကွာ။ ကိုယ့် linux က talk မရတော့ ချာတူးဖြစ်တာကို ၀န်ခံရတော့မလိုဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် linux ကို ဘယ်တော့မစွန့်ပယ်ခဲ့ပါဘူး။ ၀င်းဒိုးကို သုံးတတ်သလို
linux ကိုလဲ နည်းတူသုံးတတ်အောင် အမြဲကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ http://www.ubuntu4mm.org/ဆိုက်နဲ့တော့ ကျနော့်
အတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ လိုက်ဖတ်တယ်။ ကောင်းတာ ကြိုက်တာတွေ့ရင်စုဆည်းတယ်။ ပရင့်ထုတ်တယ်။
ပြန်ဖတ်တယ်။ အခုဆိုရင် ၀င်းဒိုးရော၊ လင်းနက်စ်ပါ မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာ။ expert တော့မပြောဘူးနော်။ အသုံးပြုတာကစ
Window/ linux အင်စတောထည့်သွင်းပုံပါ မဆိုးဘူးပေါ့လို့ပဲ ပြောပါရစေဗျာ။
ကဲ...ပြောချင်တာက ”Linux မှာ Gmail Voice နဲ့ Video Chat သုံးနိုင်ပြီ” ဒီခေါင်းစဉ်ဟာ ကျနော်ရေးတာမဟုတ်ပါ။ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှာ ကို KznT.က ရေးထားတာပါ။ ဘာမှအခက်အခဲမရှိပါဘူး။ သူရေးထားတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ရုံပါပဲ။ တစ်ခုရှိတာက ၀င်းဒိုးမှာ ဂျီမေးလ်နဲ့ ဂျီတော့အကောင်းတို့ကို talk တော့မယ်ဆိုရင် ဂျီတော့ကိုပဲ အသုံးပြုတော့ Linux မှာလဲ အဲလိုပဲထင်နေတာ။ ကျနော် အဓိကတိုင်ပတ်တာ အဲဒါပဲ။ မှတ်ထားပါဗျာ....Linux မှာ ဂျီတော့အကောင့် သီးသန့်မလိုပါဘူး။
ဂျီမေးလ်ကနေ long in ၀င်လိုက်ရင် ခုဏက Install gtalk voice and video chat ထည့်သွင်းလိုက်ပြီးရင် Linux မှာ talk တာရော chat တာပါအားလုံး အားလုံးကို အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့ Linux ကို ချာတူးပြောခံ
ကို KznT. ရဲ့ ”Linux မှာ Gmail Voice နဲ့ Video Chat သုံးနိုင်ပြီ” ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီနေ့တော့ မနက်ပိုင်းက သိပ်မအားတာနဲ့ ညနေပိုင်းလေးမှ စာလိုက် ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတွေကတော့ ထူးတယ်ဗျို့ - Linux သမားတွေ Ubuntu သမားတွေအတွက်တော့ ပိုတောင် ထူးတယ်လို့ ပြောရမယ် - အဲ့သီတင်းကတော့ -
ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ မျှော်လိုက်ရတဲ့ Gmail Voice နဲ့ Video Chat - အခု Linux မှာ သုံးလို့ ရပါပြီ တဲ့ Ubuntu မှာတင်မက တစ်ခြား Debian-based Linux distributions တွေမှာလည်း သုံးလို့ ရပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
အသုံးပြုချင်သူများ Gmail.com/videochat ကိုသွားရောက်ပြီး Plugin ကို Download ချနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ထားတာကလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် .deb package နဲ့ပါဗျာ ကဲ ! ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်လဲ
ကျွန်တော်တို့ စောင့်နေတာလည်း ကြာပြီ - သူများတွေ Mac တို့ Windows တို့မှာ ဒီဟာက သုံးနေတာ အိုသေတော့မယ် Linux user တွေ သုံးမရနိုင်လို့ ဘာကြောင့်များ ဒီလောက်တောင် ခက်ခဲနေလဲ ဆိုပြီး သိချင်နေတဲ့ အဖြေကိုလည်း ဒီနေ့ သိလိုက်ရပါတယ်။
Google မှာ engineer အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Justin Uberti ရဲ့ Linux နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ အကြောင်း ပြောကြားသွားတာကတော့ -
" ကျွန်တော်တို့ ဒီ Release မှာ ရုပ်သံပိုင်း ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အသစ်စက်စက် အားလုံးကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ နည်းပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး 64 bit မှာပါ သုံးနိုင်ဖို့ နဲ့ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ Webcam တွေ အားလုံးနဲ့ပါ အရံသင့်သုံးနိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Windows နဲ့ Mac versions တွေမှာလိုမျိုး Feature အပြည့်အစုံနဲ့ သုံးနိုင်အောင် အသေးစိတ် ပြင်ဆင် နေခဲ့ရလို့ ကျွန်တော်တို့ အချိန်တွေ အများကြီး ပေးခဲ့ရတာပါ။ ဒါမယ့် ခုတော့ Google Voice နဲ့ Video က Desktop platforms အားလုံးအတွက် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ မို့လို့ အရမ်းကို ကျေနပ် ပျော်ရွှင်နေမိပါတယ် "
သူတို့ကို ကျွန်တော် ပြောချင်တာကလည်း ဘာလောက်ပဲကြာကြာ ခုသုံးရပြီ ဆိုတော့ - ကျေနပ်ပါတယ်ဗျာ - အရမ်းလည်း ပျော်ပါတယ် - ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်လို့။